Design enweghị ike ịnapụta afọ ojuju afọ | Martech Zone
Tọzdee, Nọvemba 13, 2014 Sunday, October 4, 2015 Douglas Karr
Nke ahụ bụ nkọwa dị oke egwu sitere n’aka Edward R. Tufte, onye edemede nke Ngosipụta Ngosipụta nke Ọnụọgụ Ozi, na ihe omuma a sitere na OneSpot.
Ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ụbọchị ọ bụla, anyị na-edebe akwụkwọ ozi iji bipụta ya na ndị na-ege anyị ntị. Anyị na-enyocha otu ọ bụla na anyị na-achọ ụfọdụ isi ihe:
Mara mma, ọgaranya imewe.
Akụkọ na-adọrọ adọrọ na / ma ọ bụ ndụmọdụ bara uru.
Imirikiti ihe omuma ihe ndi anyi juru bu ihe ntinye nke mmadu nke ejiri ihe mara mma. Infographics abughi nani ihe osise mara mma. Ha kwesiri ibu uzo gosiputara na ihe omuma nke apughi nkowa ya site na ederede. Isiokwu ma ọ bụ akụkọ dị n'azụ ihe ngosi ahụ kwesịrị iji nlezianya see ihe osise na-enyere onye na-ekiri ya aka ịghọta na jigide ozi ị na-enye. Ihe data ga-akwado akụkọ ị na - enye - mee ka onye na - ekiri ya ghọta mmetụta nke nsogbu na / ma ọ bụ azịza ya.
Site na epic ịga nke ọma nke Pinterest na Instagram, visual web aghọwo ihe dị ike ma dị mkpa maka ndị na-ere ahịa ọdịnaya. Hụ ihe kpatara ụbụrụ anyị ji achọ ihe oyiyi ma chọpụta ụfọdụ ngwaọrụ ga - enyere gị aka iji mepụta ọmarịcha ọdịnaya anya na - enweghị otu ndị na - emepụta ihe na ndị isi nka n’azụ gị. Erica Boynton, OneSpot
Ihe omuma ahu na agagharia ahia ahia site na uzo di iche iche - dika foto, ihe odide ederede, eserese na eserese, agba, akara, akara ngosi, vidiyo na ihe omuma - nke na enyere aka igbasa akuko a. Ha na-enyekwa data nkwado!